Ka shaqaysii iPhone kaaga, iPadka ama Apple Watch tooshka Xarunta Kontroolka [Pro tip] | BehMaster
Bogga ugu weyn/iPhone/Ka shaqaysii iPhone kaaga, iPadka ama Apple Watch tooshka Xarunta Kontroolka [Pro tip]
Ka shaqaysii iPhone kaaga, iPadka ama Apple Watch tooshka Xarunta Kontroolka [Pro tip]
Waxaan rabnaa inaan kaa caawino sidii aad u maarayn lahayd Xarunta Xakamaynta, mid ka mid ah sifooyinka ugu awooda badan iyo kuwa aan laga faa'iidaysan ee aaladaha Apple. Dhaqanka Mac Taxanaha Xarunta Xakamaynta Pro Talooyinku waxay ku tusi doontaa sida ugu wanaagsan ee looga faa'iidaysan karo sanduuqan aaladaha waxtarka leh ee iPhone, iPad, Apple Watch iyo Mac.
Ma waxaad wax ka raadinaysaa qol mugdi ah? Waxaad u rogi kartaa iPhone-kaaga, iPad-kaaga iyo xitaa Apple Watch kaaga toosh adiga oo hal taabo oo keliya ku jira gudaha Xarunta Kontroolka. Waan ku tusi doonaa sida.
Iftiishka LED-ka ee ku yaal dhabarka aaladdaada Apple waxay wax ka qaban kartaa wax ka badan oo keliya iftiiminta sawirradaada. Waxa kale oo ay labanlaabantaa sidii toosh waxtar leh marka aad isku dayayso inaad ku aragto mugdiga. Oo hawlgelintu ma fududayn karto.
Daar tooshkaaga gudaha Xarunta Kontroolka
Apple waxa ku jira badhanka tooshashka gudaha Xarunta Xakamaynta sida caadiga ah, si aad u dhaqaajiso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad raacdo tillaabooyinkan iPhone iyo iPad:
Open Control Center adigoo hoos uga soo xaaqaya geeska kore ee midig ee shaashaddaada (ama kor uga soo koraya moodooyinka iPhone ee leh ID Touch).
Taabo toosh badhanka si aad u shido nalalka LED-ka ee qalabkaaga. mar kale taabo si aad u damiso
Haddii kale, taabo oo hay toosh badhanka talaabada labaad si aad u muujiso slider kuu ogolaanaya inaad hagaajiso iftiinka tooshashka. Waxa kale oo aad awood u siin kartaa tooshka shaashadda qufulka ee iPhone, taasina waa ikhtiyaarka ugu fudud marka qalabkaagu xiran yahay. Si kastaba ha ahaatee, marka la furo, habkani waa ka fudud yahay.
Ogow in aanay jirin wax toosh ah oo ku jira moodooyinka iPad-ka oo aan lahayn nalka LED-ka.
Daar tooshkaaga Apple Watch
Waxa kale oo aad Apple Watch u rogi kartaa toosh la yaab leh oo waxtar leh. Raac tillaabooyinkan Apple Watch:
Kor uga xaaq dhanka hoose ee shaashadda intaad ku jirto wejigaaga si aad u furto Control Center.
Taabo toosh Badhanka.
Taabo badhanka tooshashka, ama taabo oo qabo xakamaynta dhalaalka.
Apple Watch ma laha nalka LED-ka, dabcan, markaa taa beddelkeeda muuqaalkeedu wuu caddaa oo u iftiimaa sida ugu macquulsan. Ma aha mid waxtar u leh sida iftiinka LED-ka ee iPhone iyo iPad, laakiin hubaal waa faa'iido leh qanjaruufo.
Waxaad haysataa dhowr ikhtiyaar oo kale oo Apple Watch ah, sidoo kale. Marka tooshku damo, bidixda u jiidhku waxa ay dhaqaajinaysaa saamayn strobe ah, bidixda u dhufo mar labaad waxa ay iftiinka cas u rogi doontaa.
Si dhakhso leh ugu qabso xusuusta codka iyada oo la socota marin-gaabeedka Xarunta Xakamaynta [Pro tip]
Sida Loo Sameeyo Link Tree Instagram-ka 4 Tallaabo Fudud
saac ka hor 12
Waa maxay sababta ay tahay inaad u isticmaaleyso hubinta hal bog ee WooCommerce
7 Hababka Lagu Baaro & Falanqaynta Dhageystayaashaada SEO
Daawo goos gooska rasmiga ah ee soo socda xilli saddexaad ee taxanaha TV-ga Apple 'Isku day'
Netflix waxay heli doontaa ikhtiyaarkaas ka jaban ee ay taageerto xayeysiiska mustaqbalka
Sida loogu daawado fiidiyowyada YouTube-ka Apple Watch kaaga
Fiidiyowga: Astaamaha qarsoon ee aadka loo yaqaan ee ku jira iOS 16 oo aadan aqoon
iMazing waxa ay soo saartaa ciyaaryahan muusig oo cusub, macruufka 16 waafaqid iyo faa'iidooyin kale
Fiidiyowga: iOS 16 beta 2 ayaa isbeddelaya sida qaababka cusub ee gidaarka, kaydinta LTE iyo in ka badan
Qaado nooca abka leh tan cusub oo bilaashka ah ee jebinta tweak
Fiiri teaserka ugu horreeya ee taxanaha xaddidan ee Apple TV 'Shanta Maalmood ee Memorial' ee ay jilayso Vera Farmiga
Tim Cook wuxuu leeyahay 'la soco' nooc ka mid ah alaabada AR, malaha madax-madaxeedka xanta ah
Soo saaraha baabuurta korantada Polestar hadda waxay taageertaa Apple CarPlay
Sida loo hagaajiyo abka aan ka muuqan iPhone Spotlight Search
App-ka Ikea's iPhone wuxuu hadda sawiri karaa qol wuxuuna ku beddeli karaa alaabta gurigaaga qaybo macmal ah
Heesaha uu aqoonsaday Shazam ee ku jira Xarunta Xakamaynta iPhone hadda waxay la mid yihiin abka Shazam